Otu esi eji ma tinye ndị ọrụ na Telegram na -enweghị nọmba ekwentị | Nzukọ mkpanaka
Otu esi eji ma tinye ndị ọrụ na Telegram na -enweghị nọmba ekwentị
Edere Ferreno | 18/10/2021 16:00 | Nhazi ịkparịta ụka n'Ịntanet, telegram
Telegram bụ otu ngwa izi ozi kacha ewu ewu n'ụwa, n'eziokwu ọ bụ onye na -emegide WhatsApp. Ọ bụ ngwa pụtara maka nzuzo ya, yana kwa na -ewebata ọrụ ọhụrụ. Otu n'ime uru ma ọ bụ njirimara ya bụ nke ahụ anyị nwere ike iji Telegram na -enweghị nọmba ekwentị. Nke a bụ ihe doro anya na -amasị ọtụtụ ndị ọrụ.
Ọtụtụ ndị ọrụ na -achọ mara ka ọ ga -esi kwe omume iji Telegram na -enweghị ekwentịdịka ọ bụ ihe ị nụtụrụla na nso nso a na nke izizi, dịka ọmụmaatụ. Usoro a abụghị ihe mgbagwoju anya na anyị ga -agwa gị gbasara ya n'okpuru. Ọ bụ ezigbo ụzọ iji nweta ngwa izi ozi a. Na mgbakwunye, ịnwere ike ịgbakwunye ndị mmadụ na -enweghị nsogbu ọ bụla, ka ọ nwee ike iso ha kparịta ụka.
Ọ dị mkpa ịmata ihe ga -esi na ya pụta enwere ike iji ngwa ahụ na -enweghị ekwentị. Agbanyeghị ịdebanye aha na ya anyị ga -achọ ekwentị mgbe niile. Ebe ọ bụ na oge ọ bụla anyị banyere na onye ahịa Telegram, ekwentị a na -ajụ ga -enweta koodu nkwenye. N'ikwu ya n'ụzọ ọzọ, anyị chọrọ nọmba jikọtara na akaụntụ ahụ n'ụzọ ụfọdụ, n'agbanyeghị na nọmba ekwentị ahụ adịghị mkpa iji ngwa ahụ.
Nọmba ekwentị agaghị adị mkpa ịgbakwunye ma ọ bụ gwa ndị ọrụ ndị ọzọ okwu na Telegram. Nke a bụ ihe na -eme ka iji ngwa ahụ dị mma nke ukwuu, ebe ọ bụ na ọtụtụ ndị ọrụ anaghị enwe ahụ iru ala na -enye ndị ọzọ nọmba ekwentị ha ma ọ bụ na ha achọghị ka ndị ọzọ hụ ya. Na ngwa izi ozi a, anyị na -ezere nsogbu a, ebe enwere ụzọ iji ya na -enweghị ime ka data a pụta ìhè.
1 Aha njirimara na Telegram
2 Mepụta aha njirimara na Telegram
3 Zoo nọmba ekwentị gị
4 Tinye ndị ọrụ na Telegram
Aha njirimara na Telegram
Telegram nwere usoro na -enye anyị ohere iji ngwa na -enweghị ekwentị. Nhọrọ a bụ aha njirimara, nke na -arụ ọrụ n'otu ụzọ ahụ dị ka aha njirimara na netwọkụ mmekọrịta. Nke ahụ bụ, onye ọ bụla nọ na ngwa ahụ nwere ike ịchọ anyị site na iji aha njirimara wee si otú a malite mkparịta ụka anyị, na -enweghị ma ọ bụ mara nọmba ekwentị anyị. Ọ bụ ihe nye ọtụtụ ndị mmadụ na -enwekarị ihe nzuzo, n'ihi na ha na -ewere nọmba ekwentị dị ka ozi nwere mmetụta, nke ha achọghị ịkekọrịta belụsọ na ọ bụ ihe dị mkpa n'ezie.
Site n'iji aha njirimara kama nọmba ekwentị, anyị nwere ike iji ngwa ahụ na -enweghị nsogbu ọ bụla. Anyị agaghị enwe oke na iji Telegram na ama anyị. Anyị ga -enwe ike ịrụ otu ọrụ ahụ anyị na -emekarị: izipu ozi, oku ma ọ bụ oku vidiyo, ihe a niile nwere ụkpụrụ zuru oke. Maka ọtụtụ ndị ọrụ na Telegram, a na -ewepụta ya dị ka ihe nzuzo nzuzo ọzọ, nke na -eme ka iji ngwa a dịkwuo mma, dịka ọmụmaatụ.
Aha njirimara bụ ihe anyị nwere ike iji ozugbo anyị nwere akaụntụ na ngwa. Imepe akaụntụ n'ime ngwa ahụ ga -achọ ka anyị jiri akara ekwentị, dịka ụzọ iji nyochaa njirimara anyị. Ozugbo anyị mepụtara akaụntụ a na Telegram, anyị nwere ike iji ya na -enweghị nọmba ekwentị. Aha njirimara ga -anọchi aha njirimara ahụ ka ụzọ ndị ọzọ ga -esi chọọ ma ọ bụ kpọtụrụ anyị na ngwa.
Mepụta aha njirimara na Telegram
Dị ka ị nwere ike iche n'echiche, ihe anyị ga -eme mgbe ahụ bụ imepụta aha njirimara ahụ na akaụntụ Telegram anyị. Mgbe anyị mepụtara akaụntụ na ngwa ahụ, ọ bụghị iwu na ị ga -enwe utu aha ma ọ bụ aha njirimara, yabụ na ọtụtụ ndị mmadụ enwebeghị otu. N'ọnọdụ ọ bụla, usoro imepụta ya dị nfe, ka onye ọ bụla nwee ike nweta aha a. Ọ bụ ihe anyị nwere ike ime ma na ekwentị anyị yana na Telegram Desktop (ụdị ngwa nke ngwa). Nzọụkwụ ị ga -eso n'okwu a bụ:
Mepee Telegram na ekwentị gị.
Pịa akara atọ kwụ ọtọ n'akụkụ aka ekpe nke ihuenyo ahụ iji gosipụta menu akụkụ nke ngwa ahụ.
Gaa na Ntọala.
Pịa na Aha aha gị na ngalaba Akaụntụ.
Ọ bụrụ na ịnweghị utu aha, tinye nke ịchọrọ ịbụ aha njirimara gị ma ọ bụ utu aha.
Lelee ma ọ dị.
Nke a bụ nzọụkwụ mbụ na usoro a, yabụ anyị nwere aha njirimara ahụ. Ọ bụ nzọụkwụ mbụ ịgbaso iji nwee ike iji Telegram na -enweghị nọmba ekwentị. Mgbe ị na -eke aha njirimara ahụ, ọ dị mma na ọ bụ aha dị mfe, na ndị ọrụ ndị ọzọ ga -enwe ike ịchọ n'enweghị nnukwu nsogbu, yana ọ bụ ụzọ dị mma iji mata anyị, ya bụ, na ọ dabara anyị nke ọma. Ngwa na -enye anyị ohere igbanwe aha ahụ mgbe ọ bụla anyị chọrọ, yabụ ọ bụrụ na obere oge ị naghị enwe obi ụtọ, ị nwere ike gbanwee ya na onye ọzọ nọchitere anya, dịka ọmụmaatụ.
Zoo nọmba ekwentị gị
Anyị chọrọ ka aha njirimara bụrụ ụzọ ndị ọrụ ndị ọzọ na Telegram ga -esi chọta anyị wee kpọtụrụ anyị. Nke a pụtara na anyị ga -ezobe nọmba ekwentị anyị na ngwa ahụ, ka onye ọ bụla ghara inwe ike iji ya chọta anyị, na mgbakwunye na ime ka onye ọ bụla ghara ịhụ data a. Nke a bụ ihe dị nfe nke anyị ga -enwe ike ime n'ime ngwa izi ozi n'onwe ya. Ndị a bụ usoro anyị kwesịrị ịgbaso:
Pịa akara atọ kwụ ọtọ n'aka ekpe ka igosipụta akụkụ akụkụ nke ngwa ahụ.
Tinye ngalaba nzuzo na nchekwa.
Pịa na nhọrọ Nọmba ekwentị.
Họrọ na onweghị onye ga -ahụ nọmba ekwentị gị.
Ọ bụrụ na ịchọrọ ka ihe dị iche, tinye nhọrọ ahụ na ngalaba a.
Site na izo nọmba ekwentị anyị na -eme nke ahụ mgbe Ka anyị jiri Telegram na ekwentị anyị na -enweghị nọmba ekwentị. Aha njirimara ga -abụ ụzọ anyị ga -esi amata onwe anyị ma bụrụ onye a ga -achọpụta n'ime ngwa ozi ama ama na gam akporo na iOS. Na mgbakwunye na ewebatala ihe mkpuchi nzuzo ọzọ na ngwa ahụ, nke bụ ihe ọzọ dị mkpa maka ọtụtụ ndị na -eji ya.
Mgbe mmadụ na anyị na -akparịta ụka na ngwa wee gaa na profaịlụ anyị iji hụ ozi anyị, a gaghị egosipụta nọmba ekwentị. Ọ gwụla ma onye ahụ ọ bụ otu n'ime ndị anyị tinyepụrụ iche, ọ nweghị onye ga -ahụ nọmba ekwentị a mgbe ha na anyị na -akparịta ụka. Ha agaghị enwe ike iji data a chọọ anyị, ma ọ bụrụ na ha nwaa ọchụchọ ahụ agaghị enye nsonaazụ, nke na -egosi na nke a bụ ihe na -arụ ọrụ nke ọma.
Tinye ndị ọrụ na Telegram
Ajụjụ nke ọtụtụ ndị ọrụ nwere bụ na ọ bụrụ na anyị na -eji Telegram na -enweghị ekwentị, ma ọ bụrụ na ụzọ ịgbakwunye kọntaktị na akaụntụ anyị gbanwere. Usoro ka dị otu a na nke a. Mgbe anyị na -achọ ndị ọrụ ndị ọzọ na ngwa anyị nwere ike ịme ya n'ọtụtụ ụzọ, otu nhọrọ anyị nwere ruo ugbu a. Ị nwere ike ịchọta onye ọzọ na -eji nọmba ekwentị ma ọ bụ aha njirimara (ọ bụrụ na ha nwere otu na akaụntụ ha).
Ọbụlagodi na ị na -eji Telegram na -enweghị nọmba ekwentị, kọntaktị ndị dị n'akwụkwọ ekwentị gị nke na -eji Telegram ka na -egosipụta. Ị ga -enwe ike ịhụ ha na ngalaba Ndi ana -akpo na menu akụkụ nke ngwa. Na mgbakwunye, oge ọ bụla otu kọntaktị gị sonyere na ngwa ahụ, ị ​​ga -enweta ọkwa na -agwa gị gbasara ya. Yabụ ị ga -enwe ike ịmara mgbe niile ma ọ bụrụ na mmadụ na -eji ngwa izi ozi a na ekwentị ha. A ga -atụkwasị ndị a na akpaghị aka na kọntaktị gị na ngwa.
Ọ bụrụ n'ịchọrọ ịchọta mmadụ na Telegram, iji tinye ha na kọntaktị gị, ị nwere ike ịme ya n'ụzọ abụọ. Ị nwere ike tinye nọmba ekwentị onye a wee tinye ya na kọntaktị gị ozugbo, dị ka a ga -asị na ị na -etinye kọntaktị n'ime akwụkwọ ndekọ ekwentị gị. Ọ bụ otu usoro na nke a, yabụ na ị gaghị enwe nsogbu ọ bụla. N'aka nke ọzọ, na Telegram ị nwere ike iji aha njirimara nke onye a wee chọọ ha na ngwa ahụ. Site na ịpị akara ngosi iko iko ahụ anyị nwere ike mee ọchụchọ, gụnyere ọchụchọ maka otu onye. Yabụ na anyị nwere ike tinye aha njirimara ahụ ọ ga -eduga anyị na onye a. Mgbe ahụ anyị nwere ike ịmalite mkparịta ụka na ha na ngwa.
Ọ bụrụ na ọ bụ mmadụ ka anyị chọrọ ịkpọtụrụ, anyị nwere na ntọala nkata ahụ ohere ịgbakwunye onye a ma ọ bụ akaụntụ na kọntaktị. N'ụzọ dị otu a, anyị ga -enwe ike ịgwa ha okwu oge ọ bụla anyị chọrọ, ebe ọ bụ na echekwara ha dị ka kọntaktị na usoro a na ngwa. Agbanyeghị na anyị na -eji Telegram na -enweghị nọmba ekwentị, ụzọ ịgbakwunye ma ọ bụ ịkpọtụrụ ndị ọzọ na ngwa ahụ anaghị agbanwe. Ọ bụrụ na ndị ọzọ chọrọ ịchọ anyị, ha nwere ike jiri naanị aha njirimara anyị mepụtara.
Pathzọ zuru ezu na edemede: Nzukọ Ekwentị » Nhazi ịkparịta ụka n'Ịntanet » Otu esi eji ma tinye ndị ọrụ na Telegram na -enweghị nọmba ekwentị
Telegram vs WhatsApp: nke ka mma?
Windows 10 vs Windows 11: ọdịiche dị iche